Wafdi Ballaaran oo ka Socda Maamulka Puntland oo soo Gaaray Kismaayo |
Wafdi Ballaaran oo ka Socda Maamulka Puntland oo soo Gaaray Kismaayo
Eriacta buy online, purchase dapoxetine. Wafdi ballaaran oo ka socda maamulka Puntland ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyadoo ay si diiran usoo dhaweeyay madax ka tirsan maamulka Jubba.
Wafdigan ayaa ka koobnaa wasiirka cadaaladda Puntland Mudane Ismaaciil Max’ed Warsame, Wasiirka deegaanka iyo Dalxiiska Puntland Mudane Guuleed Saalax iyo laba xildhibaan oo ka tirsan maamulkaasi, waxaana sidoo kale wafdiga qeyb ka ahaa afar xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Wafdigan oo kasoo kicitimay magaalada Muqdisho ayaysan ilaa imika cadeyn ujeedooyinka rasmiga ah ee imaatinkooda, haseyeeshee Xildhibaan Cabdi Max’ed Cali oo ka mid ah xildhibaannada dowladda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay u imaadeen indho-indheyn xaaladaha ammaan iyo horumarka Jubooyinka iyo weliba in ay ka qeybqaataan dhismaha maamulka Jubba.
Maamul goboleedka Puntland ayaa kamid ah maamullada ay wada shaqeynta dhow leeyihiin maamulka Jubba ee uu hogaamiyo Axmed Max’ed Islaam (Axmed Madoobe), waxaana imaatinka wafdigan uu kusoo beegmayaa iyadoo magaalada Kismaayo ay ka socoto soo xulista baarlaman uu yeelan doono maamulka Jubba.